कावासोतीको मेयरमा कांग्रेस र उपमेयरमा एमालेलाई अग्रता
नवलपुरको कावासोती नगरपालिकाको मेयरमा नेपाली कांग्रेस र उपमेयरमा एमालेले प्रारम्भिक अग्रता लिएको छ।
तारकेश्वर नगरपालिकामा कांग्रेसको अग्रता
काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिकाको प्रमुखमा नेपाली कांग्रेसले अग्रता लिएको छ।
घोराही उपमहानगरमा गठबन्धनको अग्रता
घोराही उपमहानगरपालिकाको प्रमुख पदमा गठबन्धनका उम्मेदवार नेकपा (माओवादी केन्द्र)का हेमराज शर्माले सुरुआती अग्रता लिएका छन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाको मतगणना शुरू काठमाडौं महानगरपालिकाको मतगणना शुरू भएको छ। सर्वदलीय बैठकपछि मतगणना शनिबार बिहान १० बजेदेखि शुरू भएको हो।
रसुवामा गणना शुरू‚ लाङटाङको मतपेटिका बोकेर ल्याइँदै रसुवामा गोसाइकुण्ड बाहेक आमाछोदिङ्मो, उत्तरगया, कालिका र नौकुण्ड गाउँपालिकामा मतगणना शुरू भएको छ।
मुस्ताङको लोघेकरमा गठबन्धनलाई पराजित गर्दै एमाले उम्मेदवार विजयी मुस्ताङको लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार विजयी भएका छन्।
रसुवाको लाङटाङमा ८३ प्रतिशत मत खस्यो रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–४ लाङटाङमा ८३.१९ प्रतिशत मत खसेको छ। कुल ३६३ मतदातामध्ये १६२ पुरुष र १४० महिला गरी ३०२ जनाले मतदान गरेका छन्।
भक्तपुरमा ३ बजेसम्म ६५ प्रतिशत मत खस्यो भक्तपुरमा दिउँसो ३ बजेसम्म करीब ६५ प्रतिशत मत खसेको छ।
रौतहटमा झडप हुँदा १५ जना घाइते, महोत्तरी र सर्लाहीमा मतदान अवरुद्ध रौतहटमा झडप हुँदा १५ जना घाइते भएकका छन्। महोत्तरी र सर्लाहीमा केही समय मतदान अवरुद्ध भएको थियो।
तुलसीपुर १७ मा आज मनोनयन‚ जेठ ३ गते निर्वाचन दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका-१७ मा जेठ ३ गते मात्र निर्वाचन हुने भएको छ। नेकपा (एमाले)बाट वडाध्यक्षका उम्मेदवार लबरु चौधरीको मृत्यु भएपछि नयाँ निर्वाचन तालिका निर्धारण गरिएको हो।
चुनावमय पूर्वी पहाड
स्थानीय चुनाव दमन राई
यहि ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनले पूर्वी पहाडमा चहलपहल बढाएको छ। हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुदेखि खोटाङ, धनकुटा, इलाम, ताप्लेजुङसम्मका गाउँघर चुनावमय बनेका छन्।
बुटवलमा कसको पल्ला भारी?
नेकपा (एमाले)को गढ मानिएको बुटवल उपमहानगरमा गठबन्धनका उम्मेदवारसँग रोचक प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ।
चितवनमा ओलीको प्रश्न- कांग्रेस कार्यकर्ताले कता पीर बिसाउने हुन्?
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धनका कारण चितवनमा नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताले पीर बिसाउने ठाउँ समेत नपाएको बताएका छन्।
दाहालको धम्कीको कुनै अर्थ छैनः ओली नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले माओवादीलाई भोट नदिए देश दुर्घटनामा जान्छ भनेर धम्की दिनुको कुनै अर्थ नरहेको बताएका छन्।
केशव स्थापितसँग आयोगले फेरि माग्यो स्पष्टीकरण निर्वाचन आयोगले काठमाडौं महानगरमा मेयरका उम्मेदवार केशव स्थापितसँग फेरि स्पष्टीकरण मागेको छ।
२७ वर्षीया सिर्जना अध्यक्षको प्रत्याशी रसुवाको नौकुण्ड गाउँपालिकाको अध्यक्षको प्रत्याशी हुन्‚ २७ वर्षीया सिर्जना लामा । थुप्रै आकाङ्क्षीलाई पन्छाउँदै उनी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि एमालेबाट अध्यक्षको उम्मेदवार बनेकी छन्।